Neef la Gawracay Geedo Kama Weecdo! Maxaa ka Jira in Dad ay Damceen in ay Aamusiiyaan Bogga rasaas.com! – Rasaasa News
Jun 19, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada
Waxaanu jecelahay in aanaan waxba ka dadin akhristayaasha sharafta leh ee bogga rasaas.com oo iyagu jecel had iyo goorba in ay helaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ku saabsan arimaha bulshada, iska horimaadyada geeska afrika iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee geeska Afrika.
Hadaba kolba hadii uu boggu wax ka sheego arimahaas waxaa khasab ah in uu yeesho, akhristayaal badan oo isugu jira kuwa jecel wararka dhabta ah ee ay ka akhristaan iyo kuwa neceb in la sheego sirahooda ay qarsanayaan.
Waxaa dhacday in labadii todobaad ee ugu dambaysay ay jireen dad isku dayey in ay bogga rasaas.com xanibaan amaba ay la xidho, waxayna sameeyeen wax alaale wixii awoodooda ahayd ee ay ku dacwayn lahaayeen iyada oo aruursaday Qodobo muhiim ahaa oo ay islahaayeen waxaa ay ka soo horjeedaan dantiina. Waxaa la sameeyey qoraalo been abuur ah oo ku saabsan in uu bogu yahay boggaga argagixisada la shaqeeya, waxaa kale oo la sheegay in uu boggu yahay bogg qora arimaha galmoodka [ponographic], waxaa kale oo ay sheegeen in uu boggu qoro arimo dad takoor ah, arimahaas oo kolka aad u fiirsato ah arimo uu sheegtay ruux cadhaysan oo aan waliba lahayn aqoon iyo waayo aragnimo dhamaystiran midna.
Warafaainta aduunka ee ay internetku ugu badan tahay waxaa lagu dhisay sharci, sanad walbana waa la casriyeeyaa wixii ku soo kordha ee aan la soconin sharciyada iyada oo loo samaynayo sharciyo khuseeya waxa soo kordhay. Waxaan maalin walba la qoraa billions sharci iyo sharci daro labadaba leh, wixii sharci daro ah waxaa khuseeya hayadaha u qaabilsan shuruucda Internetka.
Waxaa iyana lama iloobaan ah in ay jiraan millions kambaniyo webhost ah kuwaasi oo sharci ku dhisan [license] oo macaamiisha ka iibiya boggaga internetka, wax alaale wixii khalad ah ee ay qortaan bogaga ay iibiyeen ma jiraan wax shaqo ah oo ay ku lee yihiin, laakiin waxaa shaqo ku leh Boliska oo hadii ay arintaasi cadaato ay khasab tahay in bogaas lagu xidho amar maxkamadeed, boggaga kaliya ee la xidho waa kuwa sawirada xun xun ee dhaawici kara maskaxda dadka.
Hadaba, labo todobaad ka hor waxaa bogan rasaas.com dacwad ka geeyey dad ka mid ah akhristayaalka oo aan hore ugu soo qoray arimo iyaga la xidhiidhi oo ay bulshada ka dhex wadeen. Waxaana ay na soo gaadhsiiyey dacwadii ay gudbiyeen qolada internetka, waxaan wax aad loo la yaabo ahayd in qodobada ay cuskadeen dadkaasi ay ahaayeen wax lagu qoslo, oo aanay marna isticmaaleen dad wax kala garanaya. Waxaa kambaniga Internetka lihi u sheegay hadii aad dacwad qabtaan orda oo waxaad war galisaan booliska isaga ayaa baadhitaan samayne.
Waxayna u tageen Booliska iyaga oo markii wax laggaga qorayey la waydiiyey in ay keenaan warqadahooda sharciga ah si baadhitaan loogu sameeyo wax ay sheeganayaan waxayna xusuusteen in magaca ay ku dacwoonayaan iyo kan warqadaha aqoonsiga ugu yaalaa ay kala duwan yihiin, waxayna noqotay arintii in iyaga laftigoodii ay Booliska ka lug bixi waayeen oo wali laga rabo in ay cadeeyaan wixii ay sheeteen, balse ay haatan taagan yihiin waanu ka noqonay.
Dadka dacwada bilaabay waxay ahaayeen dadka sida foosha xun wax uugu qora bogga Haleelo, oo iyagu muddo lix bilood ah oo xidhiidh ah caayeysay ummada sharaf leh, oo aan waxba loo dhaafi guud ahaan beeshaas iyo ruux ruuxba.
Hadab akhristayaalka qiimaha badanoow, maxaad u malaynaysaan dadka hal bil u adkaysan waayey wax yar oo sheegay in ay meel la fadhiisan karaan dadka aan damba u lahayn wax allaale wixii cay ah ee lagga sheego, ileen kalsooni bay isku qabaane.
Waxaa kale oo aan iyagana u sheegaynaa waa ummada uu Mr. Garaabo horgalka u yahay, waxaad joogtaan dalalka reer galbeedka ee korodhsada Aqoonta iyo bartana shuruucda dalalka aad joogtaan, si aydaan ugu ceeboobin.
Ogaadana waanu haynaa wax alaale wixii aad ku dacwayseen bogga, ogaadana in aanay jirin cid xidhi kartaa bogg Internet ah, marka laga reebo boggaga soo bandhiga foolxumada qaawanida dadka.
Waysha Gawrac Dibigu ha ku Quus Qaatee, Somaliya Wehelkeedu waa Waddaad Wadani ah